Mmiri na-edozi ikuku na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri na ndị nrụpụta | Ikuku
Ngwongwo ikuku na-arụ ọrụ n'akụkụ ụlọ elu na-ajụ oyi na oyi iji kesaa ma kwado ikuku site na usoro nke kpo oku, ikuku, na obi jụrụ ma ọ bụ ntụ oyi. Onye na-ekpuchi ikuku na mpaghara azụmahịa bụ nnukwu igbe nke nwere ihe na-ekpo ọkụ na ihe dị jụụ, onye na-afụ ọkụ, racks, ụlọ, na akụkụ ndị ọzọ na-enyere onye na-ahụ maka ikuku aka ịrụ ọrụ ya. Ejiri ikuku na-arụ ọrụ na eriri mmiri na ikuku na-esi na nhazi ikuku na-agafere ya, wee laghachi na ikuku ikuku.
Ihe ndị a niile na-arụkọ ọrụ ọnụ dabere na ogo na nhazi nke ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ buru ibu, a ga-achọ ọtụtụ chillers na ụlọ elu dị jụụ, ọ nwere ike ịdị mkpa maka sistemụ raara onwe ya nye maka ụlọ sava ka ụlọ ahụ wee nwee ike ịnweta ntụ oyi zuru oke mgbe achọrọ ya.
AHU nwere ọrụ nke ikuku ikuku na ikuku iji weghachite ikuku ọkụ. Ebughibu na kọmpat Ọdịdị na mgbanwe ụzọ echichi. Ọ na - ebelata ọnụ ahịa ihe owuwu ma melite ogo nke oghere.
AHU nwere ezi uche ma ọ bụ enthalpy efere ọkụ mgbake isi. Okpomọkụ mgbake arụmọrụ nwere ike ịdị elu karịa 60%
25mm panel ụdị ihe jikọrọ ya, ọ zuru oke iji kwụsị akwa oyi na-eme ka ike nke otu ahụ dịkwuo elu.
Ugboro abụọ akpụkpọ sandwiched nwere nnukwu njupụta Pu iji gbochie akwa oyi.
Heating / jụrụ coils na-mere nke hydrophilic na mgbochi corrosive ntekwasa aluminum ntù, n'ụzọ dị irè iwepụ “mmiri àkwà mmiri” na ọdịiche nke nku, ma na-ebelata ndị na-eguzogide ventilashion na mkpọtụ yana asthe oriri ike, na kwes arụmọrụ ike-amụba site 5% .
Unitlọ ọrụ ahụ na-etinye ihe mkpuchi mmiri mmiri pụrụ iche nke okpukpu abụọ iji hụ na mmiri jupụtara na mmiri na-ekpo ọkụ (ọkụ ọkụ) na nhichapu kpamkpam.
Ptmụta elu arụmọrụ elu rotor ofufe, nke bụ ala mkpọtụ, elu static mgbali, ezigbo ọrụ ma belata mmezi-akwụ ụgwọ.
A na-edozi mpempe akwụkwọ ndị dị na mpụga site na nịịl na-eduga kposara, na-edozi akwa oyi, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ilekọta na nyocha na ohere ịgba.
Onwem na ọkọlọtọ dọpụta-esi nzacha, na-ebelata mmezi ohere na-akwụ ụgwọ.
Nke gara aga: Nnyocha Ogo maka Igwe Ọkụ Igwe Chiller - LHVE Usoro Na-adịgide Adịgide Igwe Ọdụdọ Synchronous Frequency Conversion Screw Chiller - Airwoods
Osote: Cleanroom Aluminom profaịlụ
Air Ijikwa Systems
Ikuku Ikuku Ikuku Cleanroom
Rooftop Ikuku Ijikwa Unit